URyota Komatsu Tango Quintet +XNUMX (Isandi) | Umbutho Wokukhuthaza Inkcubeko kwiWadi
I-Ryota Komatsu Tango Quintet +XNUMX (isandi)
Isikhumbuzo seminyaka eli-100 sePiazzolla	I-Ryota Komatsu Tango Quintet +XNUMX (isandi)
Inkqubo ekhethekileyo enokwenziwa kuphela nguRyota Komatsu owazi konke ngetango
ILebertango Piazzolla yoqobo yeNkulumbuso yaseTokyo!
Udliwanondlebe wevidiyo yomdlali weqonga uRyota Komatsu ngoku uyafumaneka kwiYouTube esemthethweni!Ungayibona kwikholamu yolwazi olunxulumene noko emazantsi ephepha.
Ngomhla we-2021 kuDisemba ngo-11 (ngoLwesihlanu)
I-Piazzolla: Libertango-Piazzolla yoqobo (uHlelo luka-1975) -
I-Piazzolla: Ubusika eBuenos Aires, njl.
URyota Komatsu (iBandoneon)
Kumiko Kondo (ivayolin)
Shinji Tanaka (ucwangciso)
UAtsushi Suzuki (ipiyano)
UNatsuki Kido (ikatala)
UNaofumi Satake (intshukumo)
UNana & Axel (umdanisi weendwendwe)
UNana kunye neAxel
Wazalelwa eAdachi-ku, eTokyo ngo-1973.Unetalente ukusukela kwisikolo samabanga aphakamileyo kwaye wayehamba ne-bandoneon solo ngo-1991 kwinqanaba lokugqibela lomculi odumileyo u-Ranko Fujisawa. Ukusukela oko wenza i-CD yakhe yokuqala ngo-1998, wazuza imidlalo engummangaliso kwilizwe le-tango eCarnegie Hall naseBuenos Aires, eArgentina.Ngaphezulu kwama-albhamu angama-20 aveliswe nguMculo weSony. "Phila kwi-TOKYO-2002" yavavanywa kakhulu eArgentina, kwaye ngo-2003, yanconywa yiArgentine Musicians Association (AADI) kunye neBuenos Aires City Music and Culture Administration. I-albhamu ye-2015 ekhanyayo "Tint" kunye noTaeko Ohnuki ikhutshwe ngo-57!Ndifumene iBhaso leRekhodi laseJapan "iBhaso eliGqwesileyo leAlbhamu".Ukongeza kwilizwe le-tango, uthathe inxaxheba kwi-albhamu yokuhlanganiswa kukaSony "umfanekiso" kunye nohambo lokuphila "umfanekiso ophilayo" okokuqala.Ukwakhuthele ekuqambeni, kubandakanya i-anime yeFuji TV "Mononoke" ingoma ye-OP "iNyanga yokuGqibela yeNyanga", uthotho lwe-TBS "ILifa leMveli leHlabathi" ingoma ye-OP "uKaze no Uta", kunye nomdlalo bhanyabhanya "Ubomi bukaGuskou Budori" ( Ihanjiswe nguWarner Brothers, iTezuka Productions). (Imveliso), "Body Fat Meter Tanita's Employee Cafeteria" (imiboniso bhanyabhanya yaseKadokawa), idrama ye-NHK "Goen Hunter" yengoma, njl.
Baphumelele kwiKholeji yoMculo yaseTokyo.Ifundwe itango violin phantsi kweHajime Kamino kunye noFernando Suarez Pas.Emva kokusebenza noYuzo Nishito kunye no-Orquesta Tipica Pampa, ebesebenza njengelungu eliphambili lomdlali we-bandoneon iRyota Komatsu.Ubuye wenza icandelo le-choro "Trindage" njengomdlali weqela lezixhobo zomculo zaseBrazil, kwaye wenza ikonsathi kunye nabaculi abafana noJorginho do Pandeiro kunye noMauricio Carrilho.
Ukudibana ne-bass ezimbini eneminyaka eyi-18 kwaye waphumelela kwiKunitachi College of Music. Ngo-1982, waqala ukudlala umculo wegumbi. Ukusukela ngo-1990, uthathe inxaxheba kukrekhodo oluninzi, i-CM, iTV, iimuvi, kunye neminye imveliso yomculo ngomsebenzi we studio. Ngo-1991 wayezinikele ngokunzulu kwimidlalo yeetango zeenkosi uKiyoshi Shiga (Vn) no-Ranko Fujisawa (Vo). Ukuya rhoqo e-Asiya ngeminyaka yoo-1990 kwaye kwafunyanwa ivumba lenkosi u-H. Cabalcos.Emva kokusebenza kwiqela ngalinye likaKiyoshi Shiga noKoji Kyotani, uthathe inxaxheba kuzo zonke iiyunithi zeRyota Komatsu ukusukela ngo-2009. Kwenziwa iTrio Celeste ngo-2009.Usaqhubeka nemfihlakalo yetango.
UAtsushi Suzuki (umdlali wepiyano / umqambi)
Uphumelele isidanga kwiKholeji yoMculo yaseKunitachi, kwiSebe lePiano, waphumelela iBhaso leYatabe.Ukubonakala kwekonsathi yeYomiuri.Emva kokuphumelela, waqala ukuqamba kunye nemisebenzi yokusebenza eWarsaw, eMunich, njl, kubandakanya ilizwe lonke.Wadibana nomculo waseBrazil ngelixa wayesebenza njengepiyano yeqela lesiLatin, kwaye ngoku udlala njengepiyano egxile kumculo waseBrazil, onqabileyo eJapan.Njengomqambi, usebenze kumculo wegumbi elininzi, iikhonsathi zepiyano, iingoma zorhwebo, kunye neengoma zomxholo kwiinkqubo zerediyo.
UOniki Mutsuki (ikatala)
Wazalelwa kwiPhondo laseKanagawa ngo-1964.Uqalise imisebenzi yomculo kwisikolo samabanga aphakamileyo. Ngo-1990, waseka elakhe iqela, iBondage Fruit, wakhupha ii-albhamu ezi-6 kubandakanya nomsebenzi wakhe wamva nje "Isiqhamo seBondage 2005" (6).Iziqhamo zebondage ziye zadunyiswa phesheya kolwandle, kubandakanya nokumenywa kwi "Scandinavia Progressive Rock Festival" kunye ne "Prog Fest '99" eSan Francisco.Igitarari enetalente eqhubeka iguquka kwisitayile sayo yonke imihla.
Abaphumelele kwiKholeji yoMculo yaseKunitachi, kwiSebe leMculo lezixhobo.Umculi kunye nomdlali weengoma. Uyasebenza kuzo zonke iintlobo ezinje ngeBlitz philharmonic Wind, iE Little Edo Wind Ensemble, iqela leKatsuo Miyazaki, iqela lakhe iBibbidi Bops, ijezi, isiLatin, iKayokyoku, kunye nebhendi yebronze.Amagubu afundwe phantsi kweKiyoshi Hasegawa.
Imifuno ephezulu.Ndafunda i-ballet yamandulo ukusuka kwiminyaka eyi-8 eNagoya, eAichi.Wafunda phantsi kukaMichiko Matsumoto kunye noAkihiko Fujita. Ngo-2011, wamenywa nguMlawuli wezoBugcisa uV. Isaev wezoBugcisa iBallet Theatre yaseFlorida ukuba enze umculo kwi "8th International Dancers Festival" eyayibanjelwe eMiami, eFlorida, emva kokuvela kweNtsebenziswano yeBallet "Ilitye lentyatyambo". Ngo-2013, obekade edlala kwi "Polovtsian Dances" e-Aichi Triennale Memorial Triple Building performance.Emva kwexesha, wadibana ne-tango yase-Argentina kwaye wajika waba ngumdanisi we-tango. Wafunda phantsi kwe-Axel Arakaki, i-2017 yaseArgentina yeTango yeQela lobuNtshatsheli beCandelo, uCarolina Alberici, ummeli weNagoya Argentine Tango Club, kunye no-Enrique Morales, ummeli weTango Sol Nihonbashi. Kwi-2018, wafunda phesheya eBuenos Aires, eArgentina ixesha elifutshane.Ukongeza ekuthatheni inxaxheba kwiqela le-Pista ye-Tango ye-Argentina ye-Pista kunye no-Adrian Coria, uzakudlala ngaphandle e-Plaza Dorrego kunye nabadanisi balapha kwaye enze kumdlalo we-tango we-tango cafe ekudala ikho "El Grand Cafe Tortoni".Okwangoku, uwandisa amathuba okubonisa, ikakhulu kwiTango Salon eTokyo.Ukwangutitshala we-tango ofanelekileyo njengomhlohli oqinisekisiweyo weJapan-Argentina Tango Federation (FJTA).
Ukukhawulezisa iAragaki.Uzalelwe kwisithili saseAichi.Waqala ukudanisa eneminyaka eyi-13 phantsi komama womdanisi.Wafunda imidaniso eyahlukeneyo enje nge tango yaseArgentina, ihip hop, iballet, kunye nomdaniso wejazz, kwaye wavela kwizigaba ezininzi.Emva kokuphumelela kwisikolo samabanga aphakamileyo kunye nokwenza ubuchwephesha kunye nokusebenza njengomdanisi kwipaki yomxholo iminyaka emibini, iArgentina iya kufunda phesheya eBuenos Aires unyaka kwitango. Waba ngowokugqibela (kwi-2) kukhuphiswano lwe-1 lweTango ye-Argentina, kwaye ekugqibeleni waphumelela ubuntshatsheli ngo-2016 ukuze abe yintshatsheli yehlabathi.Emva koko, uthathe inxaxheba kukhenketho lwesizwe eJapan kunye neFabio Hagel Orchestra kuthotho lweMin-On Tango "iDramatic Tango" exhaswe ngumbutho weMin-On Concert Association.Kutshanje, uye wandise imisebenzi yakhe kumazwe aseAsia naseYurophu.
Ungalubona udliwanondlebe kunye nomdlali weqonga uRyota Komatsu kwiYouTube.